•Detachable Drift Eliminator: PVC tsy manimba, Famolavolana manokana
PFitsipika momba ny asa: Ny andiany BTC-S dia mampiasa ny teknolojia mikoriana mitambatra, izay manatsara ny fahombiazan'ny fampangatsiahana ny rano fanodinana, ny vahaolana glycol-water, ny solika, ny simika, ny ranon-javatra pharma, ny asidra mangatsiaka masinina ary ny tsiranoka hafa.
Ny tsiranoka fanodinana dia mivezivezy ao anaty coil avy amin'ny toerana ialana ny hafanana.
Mitifitra rano sy rivotra madio mikoriana mifanila amin'ny coil condensing, izay manampy amin'ny fihenan'ny mizana mamorona "teboka mafana" izay mety ho hita amin'ny tilikambo Cooling mahazatra hafa. Ny tsiranoka Process dia mamoy ny hafanany azo tsapain-tanana / manaikitra rehefa mivezivezy avy any ambany ka hatrany ambony ao anaty ny coil voapotsitra rano sy rivotra entina. Ny fihenan'ny singa mampihena ny etona dia manampy amin'ny fanamaivanana ny fananganana maridrefy amin'ny vatan'ny coil. Ny ampahan'ity hafanana etona ity dia avoaka amin'ny sisiny mankany amin'ny habakabaka amin'ny rivotra entina.
Ny rano tsy etona dia mianjera amin'ny alàlan'ny faritra famenoana, izay ampangatsiahin'ny rano velona faharoa izay mampiasa haino aman-jery famindrana hafanana (Fills) ary farany mankany amin'ny faravodilan'ny tilikambo, izay averina mivezivezy amin'ny paompy ambony amin'ny alàlan'ny rafitry ny fizarana rano ary mihemotra eny ambonin'ny coil.
•Rojo mangatsiaka •Indostria simika
•Fomba fizotran-tsakafo •Fambolena ranomandry
Teo aloha: Tilikambo fanamafisana ny tadivavarana mihidy - mikoriana miampita
Manaraka: Open Type Steel Cooling Tower - Cross Flow
Condenser etona etona Chiller
Fampiroboroboana ny fitrandrahana etona
Miasa Condenser evaporative
Hvac miovaova etona